ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း - Your Brain On Porn
EUR J ကို contraceptives Reprod ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ 2016 မေလ 24: 1-8 ။
Mattebo M က1,2, Tydén T က3, Häggström-Nordin E ကို4, Nilsson KW2, Larsson M က1.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပုံစံများကိုဖော်ပြရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်. ညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူများနှင့် Non-စားသုံးသူများအကြားခြားနားချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကို, ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြားအသင်းအဖွဲ့များဆုံးဖြတ်ရန်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါယူဆချက်ကို non-စားသုံးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး riskier လူနေမှုပုံစံစတဲ့နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူအဖြစ်ခွဲခြားဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသတင်းပို့မယ်လို့ ရှိ. , ။
တစ်ဦးကစာသင်ခန်းစစ်တမ်းအကြားကောက်ယူခဲ့သည် 16 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ် (N ကို = 393).
သုံးပုံတစ်ပုံ (30%) ညစ်ညမ်းကျွမ်းလောင်.
ဒီအုပ်စုထဲမှာနီးပါးတစ်ဝက် (43%) ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူကူးယူဖို့ကြိုးစားနေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ 39% ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကူးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။
(30%) တစ်ဦးကတတိယ Non-စားသုံးရွယ်တူ (p = 15) ကြားတွင် 0.001% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစအိုလိင်ဆက်ဆံ၏အတှေ့အကွုံကဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပွငျ peer-ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ (17%9vs%; p = 0.015), အရက်၏အသုံးပြုမှုကို (85% 69 vs%; p = 0.001) နှင့်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက် (27 vs 14%%; p = 0.002) တစ်ဦးမှသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ Non-စားသုံးရွယ်တူချင်းအတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာ။
ညစ်ညမ်း-စားသုံးမိန်းကလေးငယ်များကို non-စားသုံးမိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အန္တရာယ်များလူနေမှုပုံစံစတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါညွှန်ပြ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်လာသောအခါအသိအမှတျပွုရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏; ကျန်းမာရေး; လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ညစ်ညမ်း; လိင်